Global Voices teny Malagasy » Mahatsiaro ny rivodoza Gilbert i Jamaika, fa vonona hiatrika an’i Dorian ve ilay nosy? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Oktobra 2019 7:20 GMT 1	 · Mpanoratra Emma Lewis Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Karaiba, Bahamas, Jamaika, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana
Tamin'ny 12 septambra 1988, tao anatin'ny fotoan-drivodoza tao Atlantika indrindra, nisy tadio iray nantsoina hoe Gilbert  nampifoha tokoa an'i Jamaika tsy niomana hiatrika izany. Tao anatin'ny valo ora no nandalovan'ny masony avy any atsinanana ka hatrany amin'ny tanjona farany andrefana.
31 taona izay no nandravan'ity rivodoza manana sokajy fahatelo ity ny faritra maro ao Jamaika; mahatsiahy  ireo efa zokinjokiny, fa manao famakafakana  kosa ny hafa raha afa-mijoro amin'ny tadio mafimafy kokoa ny nosy amin'izao fotoana izao.
Niova ny fotoana, na izany aza, tao anatin'ny telopolo taona, lasa mihatsikaritra hatrany ireo fikorontanan-toetrandro henjana dia henjana. Ao amin'ny sokajy fahadimy mandravarava tsy misy toy izany ilay Tadio Dorian  ary nitampikitra tao Bahamas tamin'ny 1-3 Septambra 2019. Tombanana ho eo amin'ny 1300 ny isan'ny mbola nanjavona satria tena voa mafy aoka izany ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ny nosy ary sarotra ny fahatongavana tany amin'ireny toerana ireny herinandro iray taty aoriana.
Nasongadin'ny fandalovan'i Dorian ihany koa ny tsy fitoviana  ao amin'ireo nosy — tena ratsy dia ratsy lavitra ny faharavana ao amin'ny faritra iray antsoina hoe The Mudd, ohatra, izay itoeran'ny Haisiana mpialokaloka maro, raha oharina amin'ireo Bahamiana sy vahiny hafa manankarena. Zava-pitranga izany aorian'ny rivodoza hoy ny mpampianatra ambony karaibeana iray :
Mbola ambonin'izany, nisy nitatitra  amin'izao fotoana izao fa misy fiparitahan-tsolika nateraky ny tafio-drivotra  any amin'ny 80 kilaometatra any an-dranomasina sy manamorona ny Grand Bahama, mandrahona ny tontolon-dranomasina. Tena manahy dia manahy ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana na fotoana fohy na fotoana maharitra, izay tsy isalasalana fa miantraika amin'ny fiainan'ny nosy miankina amin'ny fizahantany. Efa samy nanomboka fanangonam-bola ireo fikambanana roa ireo, saingy nitombo  ireo fanahiana ireo rehefa nanatona an'i Bahamas ny tafiodrivotra an-tany mafana Humberto ny takarivan'ny 13 Septambra.
Na izany aza, manaiky tsy sazoka ireo mpitarika ara-politika  fa efa “tranainy dia tranainy” ny fotodrafitrasan'i Jamaika ary mila ampitoboina avy roa heny; ny zavamisy, vao nanambara ny kinasa  hanavao sy hanolo ny rafi-pikorianan-drano manerana ny firenena ny Praiminisitra Andrew Holness.
Nihoatra ny telopolo taona izao, eo ho eo ihany ireo tafiodrivotra miserana an'i Karaiba. Tamin'ny Septambra 2017, angamba fampitandremana mialoha fa lasa mihamahery vaika kokoa itony karazan-javatra itony amin'ny fahitana ny fiantraikan'ny rivodoza Irma sy Maria  amin'ireo nosy  maromaro  ao atsinanan'i Karaiba sy Puerto Rico .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/01/143310/
 nisy tadio iray nantsoina hoe Gilbert: http://www.loopjamaica.com/content/wild-gilbert-31-facts-31-years-later
 Tadio Dorian: https://www.accuweather.com/en/weather-news/by-the-numbers-measuring-the-fury-of-hurricane-dorian/530449
 tsy fitoviana: https://insideclimatenews.org/news/11092019/poverty-climate-change-bahamas-hurricane-dorian-risk-recovery-global-warming
 mpampianatra ambony karaibeana iray: https://www.stabroeknews.com/2019/features/in-the-diaspora/09/09/when-the-apocalypse-is-now-climate-crisis-small-island-disasters-and-migration-in-the-aftermath-of-hurricane-dorian/
 nisy nitatitra: https://weather.com/storms/hurricane/news/2019-09-11-dorian-oil-spill-grand-bahama-damages-coastline
 nateraky ny tafio-drivotra: https://weather.com/storms/hurricane/news/2019-09-06-dorian-major-oil-spill-bahamas
 manaiky tsy sazoka ireo mpitarika ara-politika: https://jis.gov.jm/govt-looking-to-diversify-water-sources/
 nanambara ny kinasa: http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20190911/20-billion-drain-plan-govt-hopes-end-recurring-corporate-area-flooding
 rivodoza Irma sy Maria: https://adra.org/video-hurricane-maria-follows-hurricane-irma/